Toeram-pamokarana herinaratra ao Ambatolampy 4 MW fa tsy 20 MW no vitany hatreto aloha
Madeleine Ramaholimihaso Voatendry ho lehiben’ny mariboninahi-pirenena
Voatendrin’ny filankevitry ny minisitra natao omaly ho lehiben’ny mariboninahi-pirenena (Grande Chancellière de l’ordre national) Ramatoa Madeleine Ramaholimihaso, fantatry ny maro amin’ny asa ataony eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena sy ny fiarovana ny zon’olombelona.
Alliance Voahary Gasy Nanafatra mafy an’i Andry Rajoelina
“farano amin’izao fitondranao izao tompoko ny gaboraraka misy hatreto”:
CAMM Hamaha ny olana eo amin’ny mpiara-miombon’antoka anaty orinasa
Hiverina hanao ny asany indray ny “Centre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar” ( CAMM) miara-miasa akaiky amin’ny tetikasa Procom vatsian’ny vondrona Eoropeanina vola sy ny antenimieran’ny varotra manerana ny Nosy.
Famitahana sy fampiesonana vahoaka ve sa tena tsy fahamatorana amin’ny fomba fiasa noho ny fahataitairana fa dia re izao fa tsy mahavokatra herinaratra afa-tsy 4MW amin’ilay 20 MW nambara ilay toeram-pamokarana herinaratra lehibe amin’ny alalan’ny masoandro natsangana ao Ambohipihaonana Ambatolampy
izay notokanana ny sabotsy 23 jona lasa teo. Tsy manaraka fenitra io ivontoerana vaovao io, hoy ny teknisianina iray nanontaniana satria tsy manana fitehirizana aratra na “batterie de stockage”. Io fitaovana io no mitahiry ny herinaratra azo avy amin`ny masoandro. Tsy mbola araka ilay fampanantenana be nataon’ny filoham-pirenena tonga tany an-toerana ny vokatra azo ary ahiana aza fa hampikorontana ny fitsinjarana herinaratra mihitsy. Fa ankoatr’izay dia nambaran-dRatovomananarivo Anmorà, mpitondra tenin`ny fiombonan`ny sendikan`ny Jirama, fa efa voaheloka ny tale jeneralin`ny orinasa, Jaomiary Olivier. Rehefa misy didim-pitsarana dia tokony hiato avy hatrany ny fifanarahana arak’asa. Tamin`ny tapa-bolana dia namoahan`ny fitsarana sazy 20 andro fidirana an-tranomaizina, sazy mihantona miampy fandoavana lamandy. Nohamafisiny ihany koa fa lasan`ny orinasa ivelany ny asan`ny JIRAMA. Ny toeram-pamokarana herinaratra any Mahajanga dia nomena ny Tiorka ny fahefana mitantana azy. Tsy manana toeram-pamokarana herinatra hotantanina intsony ny orinasa afa-tsy ireo toeram-pamokarana rano. Ohatra iray noresahin-dRatovomananarivo Anmora ihany koa ireo “branchements” nanaovana tolo-bidy, hany ka orinasa hafa no manatanteraka azy. Leo ny politikan`ity orinasa ity ireo mpiasa ka nanohy ny fitokonana. Ahiana ho tahaka ny SOLIMA teo aloha ny JIRAMA raha mitohy izao. Hiakatra ny vidin-jiro ary ahiana hiakatra avo telo heny amin`ny taona 2020 raha tsy misy fandraisan’ny fanjakana andraikitra.